Ikhadi le-Smart, iNfc Card, iRfid Tag, ikhadi lePlastiki, ikhadi leRfid-Ingqondo
Inkcubeko kunye noPhuhliso
Qhagamshelana IC Chip Card
Ikhadi le-RFID epoxy
Ikhadi elisekwe kwiprojekthi
Iimpawu zeLayibhile zeRFID
Ilebheli / isitikha esiprintiweyo se-NFC
I-RFID Inlay Inlay / isitikha
Ilebheli emhlophe / isitikha esimhlophe
I-Tag yezilwanyana zeRFID
Ithegi yokulwa nesinyithi yeRFID
Ibhanti yesandla yeRFID
Iimpawu ezikhethekileyo ze-rfid
Ikhadi lokuthintela iRFID
I-RFID ethintela imikhono
I-RFID ivimba isipaji
Imodyuli yokukhangela yebhakhowudi / injini
Ishishini IOT DTU / RTU
Umfundi / umbhali weRFID LF / HF / UHF
I-RFID IKhabhinethi eyiNgcono / iTheminali
Iwaranti esemgangathweni yeminyaka
Iminyaka ethembekileyo yeBrand
Ukukhonza abathengi kwi
ngaphezulu kwamazwe ali-100
Abathengi beVIP baphesheya
Apho kukho i-IOT, kukho iNgqondo
qhagamshela ikhadi le-ic
ikhadi lesitshixo sehotele
Ikhadi lezithuthi zikawonkewonke
Ithegi ye-epoxy yeRFID
Ikhadi lobulungu beRFID
3 ephezulu eTshayina
INGQONDO ibikhokelela kumzi-mveliso wekhadi le-RFID smart
Amalungelo obunini beekhompyuter angama-30, iofisi yesebe esi-7, i-ISO9001 / 14001/18001, i-TUV, i-SGS, i-ROHS ifanelekile.
Intsebenziswano kumashishini ahlukeneyo, kubandakanya ikhadi lesazisi / ezothutho / ukhuseleko lwasekuhlaleni / Amandla / isikolo / isibhedlele / i-inshurensi / ihotele / ulungiselelo lwezokuthengisa.
Iintsuku 7-15 on-ixesha unikezelo, iminyaka emi-2 ixesha iwaranti.
UKUSETYENZISWA KWEXABISO: Wamkelekile u-OEM, wamkelekile uphicotho zincwadi.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza eRFID
Isiseko seemveliso zesikwere
IKhadi elibalulekileyo lehotele
Sichongeke kuzo zonke iintlobo zee-keycards zehotele kubandakanya:
Ikhadi le-PVC liqhelekile kubomi bethu bemihla ngemihla, njengekhadi lokuthenga, ikhadi le-metro, ikhadi legesi, ikhadi le-cinema, ikhadi letyala, ikhadi lesazisi kunye nekhadi lebhanki esihlala silisebenzisa, izinto zayo yiPVC.
I-MIND yeyona nto iphambili kubenzi be-Rfid Cards e-China. Sivelisa onke amakhadi e-RFID amaza rhoqo kwi-125 KHz / LF, 13.56 MHz / HF, 860-960 MHz / UHF kunye nakwi-Dual Frequency (13.56 MHz / 125 KHz) okanye kwiRual Frequency (UHF 860-960 MHz / 13.56 MHz).
Izitikha zelebheli zeRFID zisetyenziswa ngokubanzi kuluhlu lwempahla nezihlangu, uLawulo lwezixhobo zeshishini, iThala leencwadi, ukhuseleko lweeasethi kunye namanye amashishini
I-RFID ifezekisa ukutya ...
Julayi 29, 21
Ngapha koko, kubomi bethu bemihla ngemihla, iindaba malunga nemiba yokhuseleko lokutya zihlala zisezindlebeni zethu. Kwimisitho evezwe kwiQela laBathengi nge-15 kaMatshi ...
Siyavuyisana nani ...
Julayi 28, 21
NgoJulayi 27, 2021, i-2021 Chengdu Intanethi yezinto zeprojekthi zeshishini elikhethekileyo kwintlanganiso yezemali yomdlalo ophumeleleyo wayephumelele ...
Isiphelo esiphakamileyo sokulwa ...
21 Julayi 21
Itekhnoloji yokulwa nomgunyathi kuluntu lwanamhlanje ifikelele kubude obutsha. Eyona nto inzima ngakumbi kukuba ngabomgunyathi ...
Idilesi: No. 600, Wulian 3rd Road, Gongxing Street, Isithili saseShuangliu, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone